တရုတ် Tools များတိုင်းတာခြင်း, လေဆာတိပ်တိုင်း, လေဆာအကွာအဝေးတိုင်းတာ Export
Home > ထုတ်ကုန်များ > တိုင်းတာခြင်း Tools များ
တိုင်းတာခြင်း Tools များ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, တိုင်းတာခြင်း Tools များ, လေဆာတိပ်တိုင်း ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, လေဆာအကွာအဝေးတိုင်းတာခြင်း R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
stainless ခိုင်မာစေ 150mm Vernier caliper
မြင့်မားသော Precision stainless ခိုင်မာစေ Vernier caliper
High Quality HSK Tool ကို Holder သန့်ရှင်းရေးချောင်းကို
High Quality Tool ကို Holder သန့်ရှင်းရေးချောင်းကို
ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားအမြင့် Precision Vernier caliper
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 11 / Piece/Pieces
stainless ခိုင်မာစေ 150mm Vernier caliper အသုံးပြုမှု: အမျိုးမျိုးသော CNC tool ကိုတိုင်းတာသည် 1.High Precision 2.Efficient နှင့်တိကျမှု 1.Material: သံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့ calipers 2.Digital calipers OD, ID ကို, ခြေလှမ်းများနှင့်အတိမ်အနက်ကိုတိုင်းတာနိုင် မည်သည့်အနေအထားမှာချိန်ညှိခြင်း 3.Zero 4.Digital calipers...
မြင့်မားသော Precision stainless ခိုင်မာစေ Vernier caliper အသုံးပြုမှု: အမျိုးမျိုးသော CNC tool ကိုတိုင်းတာသည် 1.High Precision 2.Efficient နှင့်တိကျမှု 1.Material: သံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့ calipers 2.Digital calipers OD, ID ကို, ခြေလှမ်းများနှင့်အတိမ်အနက်ကိုတိုင်းတာနိုင် မည်သည့်အနေအထား '' မှာချိန်ညှိခြင်း 3.Zero...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 1.5 - 1.65 / Piece/Pieces
High Quality HSK Tool ကို Holder သန့်ရှင်းရေးချောင်းကို သက်ဆိုင်စက် tools များ: CNC စက် tools တွေကို HSK40 / HSK50 / HSK63 / HSK100 ဗိုင်းလိပ်တံ Functions များ: 1 အဆင်ပြေပြေနဲ့အလျင်အမြန်ဗိုင်းလိပ်တံကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ဗိုင်းလိပ်တံ၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းမှ processing...
High Quality Tool ကို Holder သန့်ရှင်းရေးချောင်းကို သက်ဆိုင်စက် tools များ: CNC စက် tools တွေကို BT30 / BT40 / BT50 / HSK40 / HSK50 / HSK63 / HSK100 ဗိုင်းလိပ်တံ Functions များ: 1 အဆင်ပြေပြေနဲ့အလျင်အမြန်ဗိုင်းလိပ်တံကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ဗိုင်းလိပ်တံ၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းမှ processing...
ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားအမြင့် Precision Vernier caliper အသုံးပြုမှု: အမျိုးမျိုးသော CNC tool ကိုတိုင်းတာသည် 1.High Precision 2.Efficient နှင့်တိကျမှု အဓိကအားဖြင့် collets မျိုး, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ TeLi , CAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ , DAT tool...
တရုတ်နိုင်ငံ တိုင်းတာခြင်း Tools များ ပေးသွင်း
အသုံးပြုမှု: အမျိုးမျိုးသော CNC tool ကိုတိုင်းတာသည်
3. ကျနော်တို့စတာတွေကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများ, သံမဏိ, ပလပ်စတစ်ရှိသည်
အဓိကအားဒါ collets, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, ဦးခေါင်းစီးရီး boring BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, CAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, DAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, NT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, HSK tool ကိုကိုင်ဆောင်သူစီးရီး, collets နှိပ်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစင်တာများ, လေ့ကျင့်ခန်း Chuck Series, မျိုးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ TeLi ပေါ်မှာ။
1.Material: သံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့ calipers
2.Digital calipers OD, ID ကို, ခြေလှမ်းများနှင့်အတိမ်အနက်ကိုတိုင်းတာနိုင်
မည်သည့်အနေအထား '' မှာချိန်ညှိခြင်း 3.Zero
4.Digital calipers နှစ်ခုအပိုင်းအစဘက်ထရီပူဇော်
5. Caliper IP64, ရေအထောက်အထား
6.Sales Volume ကို: 20000pcs / လ
7.Sales ဧရိယာ: ရုရှား, ပီရူး, အမေရိကန်, ကနေဒါ, ပိုလန်, ဂျာမနီ, အီတလီ, အိန္ဒိယဒါပေါ်မှာ။
လေဆာတိုင်းတာခြင်း Tool ကို
F1 ကိုဘှားမွငျ Tools များ